မျှော်နေသူတွေအတွက်လာပါပြီ Candy Crush Saga hack for Android v1.15.0 & v1.15.1 (NO ROOT!) ~ IT SuBoo
မျှော်နေသူတွေအတွက်လာပါပြီ Candy Crush Saga hack for Android v1.15.0 & v1.15.1 (NO ROOT!)
8/14/2013 Android, Android app, Candy Crush Hack apk, Games7comments
လာပြန်ပြီနော် Candy Crush ချစ်သူများအတွက်။အရင်တစ်ခါ အသက်ခိုးနည်းတုန်းက လူကြိုက်အများဆုံးပို့စ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့် အခုလည်း Candy Crush နှင့်ပတ်သက်တာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးက Hack ထားပြီးသားပါ။သူ့ကိုသုံးမယ်ဆို အသက်တွေ Full ဖြစ်ဖို့ အရင်တစ်ခါလို Setting ပြောင်းစရာမလိုတော့ပါဘဘူး ။ သူများတွေကိုလည်း life တောင်းတာတွေ၊ Extra Moves တောင်းတာတွေလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒီထဲမှာ Full Life ကို 9999 တောင်ပေးထားတယ်ဗျာ။စိတ်ကြိုက်ဆော့စမ်းပါ။ အဲ Extra Moves ကိုလည်း 80ကနေ 200 ပေးထားတယ်ဗျား။
ချိန်ကိုက်ဗုံးတွေရဲ့ အချိန်ကိုလည်း 99 တောင်ထားပေးတယ်ဗျာ။
ပြိးရင် ရှိပြီးသား ဂိမ်းကို ဖြုတ်ရမှာပါ။မဖြုတ်ခင် ကိုယ့်ဆော့ထားပြီးသားကို မှတ်မိနေအောင် ဖွဘုတ်နှင့် ချိတ်လိုက်ပါ။ Successfully ပြရင် ရပါပြီ။ပြန်ထွက်ပြီး ဂိမ်းကို uninstall လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ဒီ ဒေါင်းထားတဲ့ ဂိမ်းကို install ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဂိမ်းကိုဖွင့်ပြီး facebook နှင့်ချိတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုနဂိုနောက်ဆုံးအဆင့်ကို ဆော့ထားတဲ့နေရာမှာ ပြန်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ဂိမ်းကို မဖြုတ်ခင် Facebook နှင့်တစ်ခါချိတ်ခဲ့ဖို့မမေ့နှင့်နော် ။မဟုတ်ရင် ဟိုအရင် က အဆင့်တွေမှာပဲ ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ကဲ အခုဆို ဂိမ်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
အောက်မှာ Hack ထားတဲ့ အမျိုးအစားတွေကို ပေးထားတယ်။မိမိနှင့်သင့်လျှော်ရာကနေသာဒေါင်းလိုက်ပါတော့။
အော် သူ့ကိုသုံးဖို့ အမြစ်တူးစရာမလိုဘူးနော်။
|------- Candy Crush mods -------|
Only 9999 lives and no tickets:
Only 9999 lives,no tickets and4color candy:
5 lives,100 moves and4color candy:
9999 lives,80-100-200 moves(first5levels 30 moves),
99 bombdelay,120 sec extra time,no choco factories and no tickets:
Version: 1.0.10 (updated to 1.15.1)
Can still sync with Facebook: first sync you need to uninstall facebook app. Once first sync is done you can reinstall Facebook app and game will sync properly until you sign out of Facebook in Candy Crush, then you will have to repeat, uninstalling Facebook to get sync to work properly. Pain in the butt but this is heavily modded and be happy sync works at all lol
Backup original with Titanium Backup or myback up, will need to restore data later. Uninstall original Candy Crush, install modded Candy Crush, play first game and close, do not try to sync Facebook yet. Now restore Candy Crush data only from backup you made earlier, reboot phone, open game, let sync or sign into Facebook and profit.
Uninstall original Candy Crush and Facebook app, install modded Candy Crush and log into Facebook through modded Candy Crush only. Will not work if Facebook is installed, it will tell you modded Candy Crush can't connect. After the first sync you can install Facebook app, it will still sync until you sign out in game.
Installation instruction for Application:
1. Make sure to sync your Candy Crush's latest progress to your facebook account.
if your unable to do this, I'm not responsible for loss of your game progress
8. If you had uninstalled your Facebook app, you can install it again
Related Posts: Android, Android app, Candy Crush Hack apk, Games
zawnaing oo August 16, 2013 at 10:39 AM
Bro ​ရေ ဖုန်း က root ထားဖို့ လိုသလားခင်​ဗျာ
zawnaing oo August 16, 2013 at 10:41 AM
​ကျေးဇူးဗျာ စာဖတ်​​တာ ​လောသွားတယ်​ Sorry
aung aung August 28, 2013 at 10:08 PM
face ကို ပြန်ချိတ်လို့ မရဘူး
thantunaung November 23, 2013 at 10:48 PM
facebookk ကိုပြန်ချိတ်လို့ မရဘူး လုပ်ပါအုံး
thantunaung November 23, 2013 at 10:49 PM
ko ning December 9, 2013 at 3:19 AM
ko ning December 9, 2013 at 3:35 AM
canday gameကိုဆွဲးမရဘူးအကိုလုပ်ပါအုံး ပြန်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်